I-Micro Links vs. Izandiso Zezinwele ze-Fusion: Konke Odinga Ukukwazi – SL Raw Virgin Hair LLC.
I-Micro Links vs. Izandiso Zezinwele ze-Fusion: Konke Odinga Ukukwazi
Sep 07, 2020 | Friendly Blogger
Ngobude obengeziwe, ivolomu, mhlawumbe ngisho nokuvela kombala, izandiso zezinwele zingenza ngokushesha noma iyiphi indlela yezinwele ibe yinhle kakhulu futhi ibe yinhle. Futhi sivame ukukhetha ukuthi lezi zandiso zenziwe ngendlela ehlakaniphe kakhulu futhi enobuchwepheshe.
Yilapho izixhumanisi ezincane nezandiso zezinwele ezihlanganisiwe zingena khona. Lezi izindlela ezimbili ezidumile nezihlakaniphe kakhulu zezandiso zezinwele ezengeza ngokushesha ubude, ivolumu, umbala, kanye hlala izinyanga.
Ngakho-ke, ake sihlukanise ngokushesha umehluko phakathi kwakho kokubili ukuze siqede noma yikuphi ukudideka okungenzeka ube nakho futhi sinqume ukuthi iyiphi ozozama ukuyizama.
Izixhumanisi ezincane ngokumelene nezandiso zezinwele ezihlanganisiwe - yini esegameni?
Igama lezandiso ngokuyisisekelo lichaza inqubo yesandiso. Izixhumanisi ezincane zisho ukuthi izandiso zixhunyaniswe nezinwele zakho zemvelo, kuyilapho ukunwetshwa kwezinwele ezihlanganisiwe kuchaza inqubo yokuhlanganisa ukunwetshwa kwezinwele zakho. Zombili zithatha noma yikuphi phakathi kwamahora angu-4-7 ukuqeda, kuye ngobude nomthamo wezinwele zakho. Izindleko zingasukela ku-$1000 kuye ku-$3000 kuye ngomuntu olungisa izinwele nendawo.
Zombili izinqubo ziyizandiso zezinwele ezingenamthungo, futhi uma zenziwe ngokomsebenzi, kunzima kakhulu ukubona umehluko phakathi kwesandiso nezinwele zakho zemvelo.
Ziyini izandiso zezinwele zezixhumanisi ezincane?
Izandiso zezinwele zesixhumanisi esincane zibandakanya ukunamathisela ithiphu le-keratin langaphambili lezinwele ngobuhlalu obufakwe umugqa we-silicone ekugcineni kwezingxenye ezincane zezinwele zakho zemvelo. Izinwele zakho zemvelo zicutshungulwa ngobuhlalu kanye nokunwetshwa kwezinwele, bese zombili ziqiniswa - zixhunywe - ndawonye. Lokhu kwenziwa ngokubophela ubuhlalu be-silicone ezinweleni zakho usebenzisa amapulangwe e-stylist noma elinye ithuluzi lokubopha. Inzuzo yale ndlela ukuthi ukushisa akudingekile, ngakho ungagwema noma yikuphi ukulimala okungenzeka kokushisa.
Kokubili ukufaka isicelo nokususwa kufanele kwenziwe ngokomsebenzi ngoba:
uma ubuhlalu buqiniswe kakhulu, bungabangela ukucindezela ezimpandeni zakho
uma ubuhlalu bungasuswanga kahle, izinwele zakho zingakhishwa
Ungabona ukuboniswa okusheshayo kokufakwa kwezixhumanisi ezincane ezisebenzayo ezinweleni ezikhululekile lapha, noma ufunde okwengeziwe kokuthunyelwe kwethu okujulile ku- izixhumanisi ezincane
Ziyini izandiso zezinwele ezihlanganisiwe?
Izandiso zezinwele ezihlanganisiwe zivame ukubizwa ngokuthi izandiso zezinwele eziboshwe ngaphambili noma eziboshiwe. Lena indlela yokwelulwa kwezinwele lapho izandiso zezinwele ezinamathiphu ngaphambili zihlanganiswa emicu ngayinye yezinwele zakho zemvelo kusetshenziswa ingcina efana neglue ye-keratin.
Izinhlobo ezingcono kakhulu zezinwele zale ndlela yokwelulwa zivame ukuthintwa ngeglue ye-keratin engalimazi. Kuphephe kakhulu ukusebenzisa 100% izinwele zomuntu ekwenzeni izinto ezihlukahlukene, okusho ukuthi ungazidaya, uzikama, uzigeze, futhi ngokuvamile unakekele izinwele zakho ngenkathi zihlanganiswa izandiso zingaphakathi.
Ukwelashwa kwesixhumanisi esincane nezandiso zezinwele ezihlanganisiwe
Zombili izindlela zokunweba zilungile kwabesifazane abanokuzwela ngokuthunga nokulukwa. Lezi zinqubo ezimbili zivimbela ukucasuka kwesikhumba njengoba zizokuvumela ukuthi ukwazi ukufinyelela nokunakekela isikhumba sakho sekhanda ngenkathi ugqoke izandiso. Zombili izindlela zikuvumela ukuthi unakekele ukunwetshwa kwezinwele zakho njengoba ubungenza izinwele zakho ezijwayelekile.
Kodwa kufanele ugweme imikhiqizo esekwe kuwoyela eduze kwezindawo ezinamathiselwe, kanye nokwenza isitayela ngokweqile.
Kudingeka futhi ukhumbule ukuthi zombili izinhlobo zezandiso zingase zidinge ukumiswa kabusha njalo emavikini angu-4-6 njengoba izinwele zakho zemvelo zikhula kanye nobuhlalu noma lapho izinwele ziboshwe khona zinyakaza.
Ulungele ukushintsha ukubukeka kwakho ngezandiso zezinwele ezidumile?
Zombili izindlela zokunweba izinwele zihlukahlukene kakhulu Isibonelo, uma ufuna ukugqama kodwa ufuna ukugwema amakhemikhali alimazayo ezinweleni zakho, zombili izinqubo zingakuvumela ukuthi wengeze gqamisa njengezandiso zezinwele zakho.
Manje, ukuze uthole imiphumela ehamba phambili, kufanele ukhethe izinwele zemvelo zekhwalithi futhi ufake izitayela ngokusemthethweni. Uma kungenjalo, ubeka ingozi yokulimaza izinwele zakho zemvelo, ngisho nesixhumanisi esincane esingenayo i-glue noma ukushisa okufakiwe.
Kodwa, uma sezingenile, ungalindela ukuthi zihlale noma yikuphi kusuka ezinyangeni ezi-3 kuye kweziyi-6 kuye ngokukhula kwezinwele zakho. Kuyizandiso ezihlala njalo, ngakho-ke akudingekile ukuthi uzikhiphe njalo ebusuku njengama-clip-ins.
Uma usulungile, zama enye yalezi zindlela zokunweba izinwele, bese uhlola 100% izandiso zethu zezinwele zomuntu esezivele zidizayinelwe izixhumanisi ezincane .